Adeegso WiFi iyo 4G isla waqtigaas barnaamijkan si aad ugu socoto xawaaraha ugu badan | Androidsis
Sida loo istcimaalo isku xirkaaga WiFi iyo 4G isla waqti isku mid ah si aad ugu soo dejiso xawaaraha ugu badan ee suurtogalka ah
Telefoonada qaar waan awoodnaas isticmaal isku xirka WiFi iyo 4g isla waqtigaas si aad ugu soo dejisan karto xawaaraha ugu badan suurtagal ah Laakiin tani waxay dhacdaa oo keliya markaan isticmaalno doorashadan si aan u cusbooneysiino barnaamijyada ama ugu rakibno Google Play.
Haddii aan rabno inaan adeegsanno isku xirka 4G oo ku daraya ugu badnaantii aan ku haysannay WiFi, waa inaan ka careysiinno ujeeddooyin kale. Ilaa aynaan ku dhaafin qoraalkan oo aad ogtahay inay jirto hab lagu sameeyo. Haddii aad 4MB xawaare ku leedahay 4G iyo WiFi-gaaga ku saabsan 1,2MBHagaag, tag hubinta, maxaad heleysaa
1 DataNinja ilaa samatabbixinta si loogu daro isku xirnaantaada
2 Tilmaamaha DataNinja
DataNinja ilaa samatabbixinta si loogu daro isku xirnaantaada
Waxaa loo malaynayaa inay tahay DataNinja waxay kordhin kartaa xawaaraha shabakaddaada adigoo isku daraya labadaba xogta kahela taleefankaaga gacanta iyo calaamaddaada WiFi. Si kale haddii loo dhigo, fikradda ayaa ah in la isku daro labadaas xawaare si loo abuuro ballaadhin ballaadhan oo ballaadhan si loogu soo dejiyo xawaare buuxa. Ma isticmaali doonno cabirkan mar walba, maadaama aan xad ku leenahay xogta aan ka badnaan karno haddii aynaan xakamayn, laakiin daqiiqado deg-deg ah ayay aad u fiicnaan kartaa.
DataNinja kaliya kuu oggolaan meyso inaad isku darto xiriirinta xogtaada iyo xiriirkaaga WiFi, laakiin sidoo kale waxaad isticmaali kartaa dhowr aaladood isla waqtigaas si aad u abuurto, ama waxa loogu yeero "ceeryaamo ceeryaamo" oo ah qaab dhismeedka qaada xaddiga badan ee xisaabinta, keydinta iyo marinka internetka, si loo helo xawaaraha ugu badan ee suurtagalka ah markaan tagno soo dejinta ama soo dejisanno.
Kaliya maheli karo xawaaraha ugu sareeya, laakiin qiyaasi duruuf ay sabab u tahay tirada dadka ku wada nool isla goobta xiriirku wuu gaabinayaa. Haddii aan ku darnay toban qalab isla mar iyada oo loo marayo DataNinja Waxaan heli karnaa xawaare ku filan oo aan awood ugu yeelan karno inaan dirno oo aan u helno xogta isla markaana aan nafteenna ugu badbaadinno xilliyadaas gaarka ah.
ka shaqooyinka ugu muhiimsan ee barnaamijkan taas oo noo ogolaaneysa inaan isku darno xawaaraha Wifi iyo 3G / 4G isla waqtigaas waa:
Kordhi xawaaraha isku xirkaaga adigoo isku daraya shabakadaha- Ku milmaan WiFi iyo shabakadaha xogta taleefankaaga adoo abuuraya ballaadhin ballaadhan oo dheereeya isla markaana hel khibrad aad u ammaan badan oo adag oo leh xawaare weyn.
La wadaag xadkaaga internetka asxaabtaada iyo qoyskaaga- Isku xidho aaladaha qoyskaaga iyo asxaabtaada oo dhan si aad u abuurto 'shabakad ceeryaamo' 'xitaa xawaare sare u soo dejiso oo u soo dejiso.
Xidhiidhka ayaa istaagay: Haddii xiriirku hoos u dhaco sabab kasta ha noqotee, tiknoolajiyada DataNinja ayaa kaa ilaalin doonta khadka tooska ah si aad u sii wadi karto daawashada filimkaas ama aad u soo gelineyso fiidiyoowga waxyaabaha aad rabto oo aan kala go 'lahayn.
Ammaan badan, xakameyn iyo asturnaan: sanadahan marka asturnaanta ay ka muhiimsan tahay, barnaamijkan ayaa mas'uul ka ah in la kaydiyo xogtaada wuxuuna ku wareejiyaa iskuxirayaal badan iyada oo loo marayo shabakad sare oo VPN ah si loo hubiyo amnigaaga iyo asturnaantaada.
Markii aan bilowno DataNinja markii ugu horeysay, waxay na weydiin doontaa helitaanka taleefanka iyo xiriirada. Kadib weydiiso ogolaansho sawirada iyo keydinta si marka aan bilowno inaan dhaqaajino shaqada isticmaalka WiFi iyo 4G isla waqtigaas, waxay noo sheegi doontaa in waxaan ku xirmi doonnaa shabakad VPN ah inaad abuureyso. Waxay ku imaan doontaa shabakadan in waxtarkeedu uu soo galo.
Xaqiiqdii, waad arki doontaa taas markaad isticmaaleyso biraawsar, marka laga reebo si aad u aragto xaddiga "turbo" ee aad isku durayso marka lagu xiro ogeysiiska firfircoon ee barta xaaladda, batoon yar ayaa soo muuqaneysa oo muujinaysa isla macluumaadka; Waad dhaqaajin kartaa badhan si aad u aragto sida wanaagsan ee WiFi-gaaga iyo isku dhafka xogtaadu u shaqeynayaan.
Shaashadda weyn waxaad ka heli doontaa helitaanka saddexda ikhtiyaar ee waaweyn: isku dar labadaada xiriir si aad xawaare dheeri ah ugu hesho, raadso saaxiib aad ku xirto "shabakadooda ceeryaamo" oo abuuro naftaada midkood si asxaabtaadu ay isugu xirmaan.
DataNinja waa barnaamij ka xiiso badan barnaamij iyo xal lagu mideeyo labada xawaare inaad haysato oo aad sidaas ugu dhex socoto xawaaraha ugu badan ee suurtogalka ah ee mobilkaaga. Iyo sidaan soo sheegnay, daqiiqadahaas gaarka ah, wadarta aalado dhowr ah ayaa bixin kara xawaare caadi ah.
DataNinja - Kordhi Xadkaaga
Developer: Smartiply, Inc.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo istcimaalo isku xirkaaga WiFi iyo 4G isla waqti isku mid ah si aad ugu soo dejiso xawaaraha ugu badan ee suurtogalka ah
Midka aan waligiis aheyn, Nokia Ion Mini, mobilada Android ka hor inta aysan la wareegin Microsoft